एसएलसी दिँदाको रमाइलो अनुभव के छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः चैत्र ७, २०७६ - साप्ताहिक
एसएलसी दिँदाको रमाइलो अनुभव के छ ?
चैत्र ७, २०७६
म एसएलसी दिने बेलासम्म पनि ड्याडीसँग स्कुल जाने गर्थें । एसएलसी परीक्षाको दुई दिन अगाडि ‘अप्सरा’ फिल्म साइन गरेँ । एसएसली परीक्षा दिन जाने दिन मेरो कान्तिपुर साप्ताहिकमा तस्बिरसहित समाचार छापिएको थियो । म त अति नै खुसी थिए । परीक्षाकेन्द्र पुग्दा सबैले मलाई हेरिरा’थे । ससानो आवाजमा सञ्चिता त एसएलसी दिने बित्तिकै पैसा कमाउने भयो भन्दै गाइँगुइँ चलिरहेको थियो । क्या मोज छ भन्दै कुरा गरेको सुनेँ । एक किसिमले त्यो दिन मेरो चर्चा सुनेर म आफूलाई सेलिब्रेटी महसुस गरिरहेको थिएँ ।
सञ्चिता लुइँटेल, अभिनेत्री
मलाई संक्षिप्त उत्तर दिनुस् भन्ने प्रश्न सकाउन डेढ घन्टा लाग्थ्यो अनि बाँकी प्रश्न डेढ घन्टामा सक्थें । तर, मैले कहिल्यै पनि प्रश्नहरू मिस गरिनँ ।
सुजित थापा, हास्यकलाकार
मेरो शरीरभरि चिटको कलेक्सन थियो त्यसैले मलाई शंका गरेर गार्डले पूरै चेकिङ गर्नु भएको थियो । तैपनि केही भेट्नु भएन र छाडिदिनुभयो । तर, पछि चिट सार्दै गर्दा पक्राउ परियो । ‘मैले तलाई माने, लु छिट्टो सार’ भनेर छाडिदिनुभयो ।
सुलक्षण भारती, रंगकर्मी
साथीलाई बचाउन मैले गार्ड सरसँग झगडा गरे अनि म पनि निष्कासित भएँ । १५ मिनेटपछि म पछाडि झ्यालबाट छिरेर अर्काे गार्ड सरको सहयोगमा परीक्षा दिएँ । स्कुलदेखि नै कलाकार हुनुको फाइदा उठाएँ । यद्यपि त्यो बेला असाध्यै डराएको थिएँ । अहिले त्यो घटना सम्झँदा रमाइलो लाग्छ ।
किशोर भण्डारी, हास्यकलाकार
रमाइलो के हुनु, टेन्सन हुन्थ्यो । रातभरि बुक पढेर सकाउनु पर्ने हुन्थ्यो । बिहानै उठेर परीक्षा दिन जाँदा बाटोमा बुक पढ्दै गइन्थ्यो, अहिले सम्झँदा रमाइलो लाग्छ । एसएलसीको अर्को फाइदा नयाँ–नयाँ साथी बनाउन पाउनु पनि हो ।
सुरविना कार्की, अभिनेत्री
ओहो, ओठ तालु सुकेर बेहाल नै भएको थियो । अहिलेलाई यति भनूँ ।
दीपाश्री निरौला, हास्यकलाकार/निर्देशक
एसएलसीको परीक्षाभन्दा पहिले हुने मूल्यांकन परीक्षा पक्कै पनि सबैभन्दा रमाइलो थियो । स्कुलले आफैं परीक्षा लिने भएर रुटिन अलि छुट्टै थियो । सुरुमै म्याथको परीक्षा थियो । कक्षामा सँगै पढ्ने साथी राजुको पढाइमा खासै रुचि थिएन । त्यसैले उसलाई यो कुरा थाहा थिएन । सुरुकै दिन ‘आज त टन्नै चिट छ, अंग्रेजीमा पक्कै पास’ भन्दै उप्रिँmदै आयो । आज म्याथको परीक्षा होभन्दा गफ नलगा न केटा हो, रुटिन हेरेर आएको हो भन्यो । परीक्षा सुरु भएपछि सबै आ–आफ्नो धुनमा लेख्न थाले, राजु ट्वाँ पर्‍यो । राजुलाई हेरेर सारा कक्षा हाँस्यो । पछि सबैभन्दा पहिले फेल हुने पनि ऊ नै भयो ।
सौरभ चौधरी, फिल्म निर्देशक
घरदेखि ९ किलोमिटर टाढा एसएलसीको सेन्टर परेको थियो । फस्ट डिभिजनमा पास हुने लक्ष्य थियो । त्यसैले चिट हातमा लुकाएर जान्थें । तर, चिट चोरेको कसैले थाहा पाउँदैनथ्यो । अनि परीक्षा हलबाट सानसँग निस्किन्थे, नयाँ–नयाँ साथीहरू भेटिन्थ्यो । आहा, साँच्चै कति रमाइला थिए ती दिनहरू ।
प्रमोद अग्रहरी, अभिनेता
एसएलसीेको दोस्रो अन्तिम दिन थियो । जिस्केर साथीको कपडा सिलाउने मेसिन चलाइरा’थें । एक्कासि चोरी औंलामा मेसिनको सियोको टुप्पो गाडियो । अब परीक्षा दिन सक्दिनँ भन्ने डर लाग्यो । सियो झिक्न मेडिकल डाक्टरकोमा गएँ । सुरुमा डाक्टरले सक्दिनँ भन्यो । मेरो त होस हवास नै उड्यो । तर, पछि धेरै मुस्किलका साथ सियो झिकियो र बढो कठिनका साथ चारवटा औंलाले मात्रै समातेर परीक्षा दिएँ । तर, अन्तिममा सबैभन्दा बढी अंकचाहिँ त्यही विषयमा ल्याएको म कहिल्यै बिर्सन्न ।
रवि आचार्य, मोडल
मैले २०५८ साल चैतमा दिएको हो, एसएलसी । देशमा संकटकाल घोषणा थियो त्यसैले मलाई लाग्छ, परीक्षा भएकै बेला चार दिन बन्द पनि भएको थियो । मेरो गाउँदेखि तीन घन्टा लाग्ने ठाउँ अर्थात् सदरमुकाम कलैयामा एक्जाम सेन्टर परेको थियो । घरबाट आउन जान टाढा हुने भएर हामी साथीहरूले मिलेर १५ दिनका लागि सदरमुकाममै डेरा लिएका थियौं । त्यतिबेला मलाई लामखुट्टेले टोकेर ज्वरो आएको थियो । कहिल्यै भुल्दिनँ म त्यो क्षण ।
छुल्ठिम गुरुङ, अभिनेत्री
म मेरो ब्याचमै गणितको सबैभन्दा राम्रो विद्यार्थी थिएँ । र, गणित टिचरको फेभरेट विद्यार्थी पनि थिएँ । सरकारी स्कुलको विद्यार्थी भएकाले अंग्रेजी भने त्यति राम्रो थिएन । एक्जाममा मेरो क्लासकै टप फाइभ केटी साथी मसँग एक्जाममा सँगै परेको थियो । उसले मलाई अंग्रेजी सिकाउने, म उसलाई म्याथ । रुटिनअनुसार म्याथको गणित अगाडि थियो । त्यो साथीले कोट्याएको कोट्याइ गरेर मैले पूरा प्रश्न भ्याउने समय पाइनँ । त्यसैले रिजल्टमा पास मार्क मात्रै आयो । तर, अंग्रेजी परीक्षाको दिन त्यो साथीले मलाई हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्स बनाइदियो ।
विज्ञान राई, म्युजिक भिडियो निर्देशक
म रातभरि पढ्थे त्यतिबेला । त्यतिबेला बत्ती गइरहने भएर मामुले मलाई पढ्नका लागि ब्याट्रीवाला लाइट ल्यादिनुभएको थियो । तर, एसएसलीका बेला एक दिन पढ्दा–पढ्दा बत्तीको ब्याट्री नै सक्कियो । अनि मैले ठूलो मैनबत्ती बालेर पढेँ । पढ्दा–पढ्दै निदाएछु । मैनबत्ती सक्किएर पूरै सिरानी जलेछ । धन्न मामु तीन बजे ट्वाइलेट जान ब्युझिनुभएछ र त्यो सब देख्नुभयो π
सन्ध्या भट्टराई, मोडल
एसएलसीको अघिल्लो रात केही साथीहरू मिलेर स्कुलको वालबाट हाम्फालेर आफ्नो बेन्चको मुनि गेस पेपर लुकाउन लामा–लामा काँटी ठोक्न गएका थियौं र ठोक्यौं पनि । धन्न, भोलिपल्ट सबै प्रश्न सजिला थिए, त्यसैले चिट चोर्नु परेन ।
प्रकाश दाहाल, रंगकर्मी
दुइटै गणितमा १००–१०० नम्बर ल्याउने संकल्प थियो । तर, एउटामा ९० र अर्कोमा ९१ मात्रै आउँदा धेरै महिनासम्म चुकचुकाएको थिएँ ।
दीपेन्द्र लामा, फिल्म निर्देशक
मैले ०४५ सालमा एसएलसी दिएको हो । जनआन्दोलनको तयारी सुरु भइसकेको हुँदा आन्दोलन चर्किंदै थियो । ट्युसन जाँदाजाँदै असनको बीचमा प्रहरी र जनताबीच हानाहान हुँदा मेरो घाँटीमा ढुंगा आएर लागेको थियो । एकछिन त गोली नै लाग्यो कि जस्तो भयो । धन्न, त्यस्तो होइन रहेछ ।
एन्जिला श्रेष्ठ, गायिका
मैले ०६५ सालमा एसएलसी दिएको हो । हाम्रो स्कुलमा एसएलसीका लागि होस्टेल अनिवार्य गरेको थियो । पढाइसँगै साथीहरूसँग गरेको रमाइलो म कहिल्यै बिर्सन्नँ । मलाई अझै याद एसएलसीको अन्तिम दिन अकाउन्टको परीक्षा थियो । अब साथीहरूसँग छुट्टिन पर्छ भनेर पूरा परीक्षा रुँदै दिएको थिएँ । मलाई लिनँ परीक्षा हल बाहिर मेरो बुबा आउनुभएको थियो । उहाँले एक्जाम बिग्रिएका कारण रोएको भन्ने लागेछ । त्यो पल संझिदा आज रमाइलो लाग्छ ।
रजिना रिमाल, गायिका
पुरानो झापामा मेरो एक्जाम सेन्टर परेको थियो । घरबाट एक घन्टा टाढा थियो । परीक्षा दिन जाँदा साइकल लिएर जान्थ्यौं र साइकल एक जना चिनेको आन्टीको घरमा राख्थ्यौं । एक दिन परीक्षा सकेर साइकल लिन फर्किंदा बाटोमा धेरै ठूलो गोबन सर्प अगाडिबाट आयो र छेउको घरमा छिर्‍यो । त्यो सानो खरले छोपेको घरभित्र एकजना आमाले नानीलाई दूध खुवाइरहेको थिइन् । त्यो देख्दा म डराएँ । कतै नानीलाई टोक्ने हो कि भन्ने डरले मैले हतारहतार बाँसको किला उखेलेर त्यो सर्पमाथि प्रहार गरेँ । सर्प मर्‍यो । एसएलसी भन्नासाथ म सधैं यो घटना सम्झिन्छु ।
विशाल निरौला, गायक/एरेन्जर
परीक्षामा लेख्दै गर्दा पुलिसले बन्दुक भिरेर हलमा निरीक्षण गरेको याद आउँछ । जब–जब उनीहरू हलभित्र छिर्थे, डरले मेरो माइन्ड एकछिन त जिरो हुन्थ्यो ।
सुदीप रेग्मी, व्यवसायी
एसएलसीको परीक्षाताका म र मेरो मितज्यू एउटै बेन्चमा परेका थियौं । मीतज्यू हाम्रो ब्याचको टपर हुनुहुन्थ्यो । यद्यपि म अंग्रेजीको क्लास टपर थिएँ । मितज्यू अंग्रेजीमा कमजोर, म गणितमा । एक्जामका बेला संयोगले एकै बेन्चमा परिएको थियो । सोच्नुस्, अब के–के भयो होला !
कुमार भट्टराई, फिल्म निर्देशक
खासमा म एसएलसी दिने बेला एकदमै बिरामी भएको थिएँ । स्कुल जान पनि नपाएकाले परीक्षा बिग्रिन्छ कि भन्ने पिर थियो । तर, रिजल्ट राम्रो भयो । यही त होला रमाइलो अनुभव π
लक्ष्मी बर्देवा, अभिनेत्री
प्रकाशित :चैत्र ७, २०७६
भारतमा आर्यनको ‘हजार जुनीसम्म’
शिवरात्रिमा गाँजा खाएको अनुभव छ ?
२९ वर्षे अनुभव सुनाउँदै राजेश हमाल
अनुभव साट्दै अनुष्का
दीपिका पादुकोणको एसिड अनुभव
होली कोसँग खेल्न चाहनुहुन्छ ? फाल्गुन २५, २०७६